China Cod Hove Collagen Peptide fekitori uye vanotengesa | Huayan
Chigadzirwa maficha: yakachena Purity, hapana chinowedzera, yakachena collagen peptide, inonhuwirira zvakanaka uye inonaka kwazvo.
Kubudirira kwekodhi collagen peptide:
Sunga ganda uye bvisa makwinya: gadzirisa dermis yakanganisa, simbisa ganda uye unyorove ganda;
Kunonoka kukwegura: kugadzirisa uye kukurudzira kutora kweganda;
Kuchenesa uye kupenya nzvimbo: kudzvinyirira tyrosinase chiitiko, nokudaro kuchitadzisa melanin deposition uye kuwedzera ganda metabolism.
Mapfupa akasimba uye majoini: simbisa uye gadziridza chimiro chemapfupa nemajoini, kudzorera mapfupa akakuvara, kuwedzera chizvarwa, uye kunyatsoisa dhipoziti nekusimbisa calcium.
Nyorovesesa bvudzi nezvipikiri: inhibit hair kuomesa, bifurcation uye chengeta zvipikiri zvakapfava kupenya;
Natsiridza kurara: iine maamino acids ekuvandudza kunaka kwekurara, zvinobudirira kubvisa tsinga uye kukurudzira kurara kwakadzika.
1.Strict tekinoroji maitiro
Pashure: Pepukisi yepasi
Zvadaro: Hove dzeMarine Oligopeptide